Dagaal Ka Dhacay Duleedka Shabeelada Hoose. – Bogga Calamada.com
Dagaal Ka Dhacay Duleedka Shabeelada Hoose.
October 31, 2017 6:09 pm Views: 173
Galabta Salaadda Casarka kadib ayaa ciidamo badan oo ka tirsan Mujaahidiinta waxay weerar culus ku qaadeen difaac ciidanka Kuffaarta Uganda ay ku leeyihiin deegaanka Mashalaayo lagu magacaabo oo u dhaw degmada Qoryooley.
Dagaalka wuxuu ahaa mid ciidanka Mujaahidiinta ay ugu tala galeen in khasaare xoog leh laagu gaarsiiyay cadowga,abaabul iyo indho indheyn kadib waxay mujaahidiinta bilaabeen inay iqtixaamaan difaacyada cadowga.
Waxaa halkaasi ka dhacay dagaalkii ugu cuslaa oo la isu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, geesiyada mujaahidiinta ayay u suura gashay inay gudaha u galaan xerada halkaasoo muddo saacad ka badan uu ka socday dagaal culus.
Mid ka mid ah saraakiishii hoggaamineysay dagaalka oo aan la hadalnay ayaa noo sheegay in kuffaarta ay tiro meydad iyo dhaawacyo ah u qaateen dhanka Danow.
Dagaalka ayaa kusoo idlaaday in mujaahidiinta ay soo naafeeyeen cadowga iyagoo nabad qabana ay kusoo noqdeen difaacyadooda.